Annaga nagu saabsan - Shanghai Ipanda Intelligent Machinery Co. Ltd.
Hal qayb oo ka mid ah Shanghai Ipanda Intelligent Machinery Co., Ltd.
Waxaan diirada saareynaa soo saarida noocyada kala duwan ee khadka wax soo saarka ee alaabada kala duwan, sida kaabsalka, dareeraha, koollada, budada, aerosol, dareeraha daxalka iwm, kuwaas oo si ballaaran loogu isticmaalo warshado kala duwan, oo ay ku jiraan cuntada / cabitaanka / qurxinta / petrochemicals iwm. mashiinada dhamaantood waxaa loo habeeyey iyadoo loo eegayo badeecada iyo codsiga macmiilka.Makiinadan taxanaha ah ee baakaduhu waa qaab dhismeed cusub, ku xasiloon shaqada oo ay fududahay in lagu shaqeeyo.Ku soo dhawoow warqadda macaamiisha cusub iyo kuwii hore si ay uga wada xaajoodaan amarada, samaynta la-hawlgalayaasha saaxiibtinimo.Waxaan macaamiisha ku leenahay Unites states, Middle East, Southeast Asia, Russia etc. waxaanan ka helnay faallooyin wanaagsan oo tayo sare leh iyo sidoo kale adeeg wanaagsan.
Hal qayb oo ka mid ah Shanghai Ipanda Intelligent Machinery Co., Ltd.waa soo saaraha xirfad leh ee dhammaan noocyada qalabka baakadaha.Waxaan bixinaa khad wax soo saar oo buuxa oo ay ku jiraan mashiinka quudinta dhalada, mashiinka buuxinta, mashiinka dhejiska, mashiinka calaamadaynta, mashiinka wax lagu duubo iyo qalabka caawinta macaamiisheena.
Waa maxay Awoodeena?
Kooxda tayada leh ee Ipanda Intelligent Machinery Garhers khubaro wax soo saarka, khabiiro iibka iyo shaqaalaha adeegga iibka ka dib, oo ilaaliya falsafada ganacsiga ee "Waxqabadka Sare, Adeegga Wanaagsan, Sharaf wanaagsan" warshadaha.Waxaannu sida ku cad shaybaarkaaga alaabtaada iyo alaabtaada buuxinta waxay soo celinayaan saameynta dhabta ah ee baakadaha Ilaa mashiinku si fiican u shaqeeyo, uma soo diri doono dhinacaaga. Ujeeddadu tahay bixinta alaabta heerka sare ah macaamiisheena, waxaan qaadaneynaa qalabka SS304, qaybaha lagu kalsoonaan karo ee alaabta.Dhammaan mashiinnadana waxay gaadheen heerka CE.Adeegga iibka ka dib ee dibedda ayaa sidoo kale la heli karaa, injineerkayagu wuxuu u aaday wadamo badan taageero adeeg.Waxaan had iyo jeer ku dadaaleynaa inaan u soo bandhigno macaamiisha mashiinno iyo adeeg tayo sare leh.
U heellanaanta Cilmi-baarista & Horumarinta
Maareyn Khibrad Leh
Fahamka Wanaagsan ee Shuruudaha Macmiilka
Bixiyaha Xalka Joogsiga ah ee Hal Joogsi ah oo leh Bixinta Kala Duwan Ballaaran
Waxaan keeni karnaa OEM&Odm Design
Horumar joogto ah oo leh hal-abuurnimo
Kalsoonida soo jiidashada leh, Huaman-ku waa lama huraan, dhulka hoos-u-socota oo ah mid la taaban karo oo waaqici ah.U shaqaynta ka dib adeegga si joogto ah, Labada dhinac u abuur laba-guul u dhexeeya macaamiisha iyo anaga.
Mashiinnada 5.0ur waxaa shahaado siinaya CE, SGS, ISO.
Awoodaha:Waxaan soo saareynaa dhammaan alaabadayada sida ku cad naqshadihii iyo farsamooyinkii ugu dambeeyay.
Kooxdayada:Waxaan shaqaaleysiinnay injineero aqoon u leh si aan u helno farsamooyinka ugu fiican.
Bakhaarka & Baakadaha:Waxaan ku kaydinnaa dhammaan alaabtayada la soo saaray si taxadar leh.
Gaadiidka:Waxaan leenahay tas-hiilaad gaadiid oo si wanaagsan loo dayactiray oo loogu talagalay macaamiisha adduunka ku yaal.
Iibka iyo Taageerada:waxaan ku siin 24 * 7 taageero iibka ka dib dhammaan macaamiisha cur.
Mashiinka buuxinta malabka oo toos ah Mashiinka Buuxinta Tuubbada Bistoon Mishiinka buuxinta dareeraha tooska ah Mashiinka Buuxinta Saliida mashiinka buuxinta saliidda cuntada mashiinka buuxinta malab